I-china yedijithali yesitovu seoyile esinesitya saseFrance, iphaneli enkulu yolawulo, isikhongozeli samanzi, umphunga kunye nethowusti yomoya yokuhambisa ifryer yesitovu 4L CO-11S abavelisi kunye nabathengisi | UShao Hong
-Le friji yomoya incinci inemisebenzi yokupheka yokubamba-nye kunye nokukhawulezisa komoya okungama-360 ° ukubonelela ngeziphumo ezihlekisayo usebenzisa ioyile encinci.
-Ifryer yomoya isebenzisa ukuya kuthi ga kwi-85% yeoyile encinci kunendlela yesiko yokufryisa ngokunzulu ngelixa igcina incasa efanayo emnandi, isenza isipho esifanelekileyo kumalungu osapho kunye nabahlobo.
-Ifryer yomoya ebanzi ye-4L, Ukongeza, Pheka isixa esifanelekileyo sokutya sabantu aba-3-5 ngexesha elinye.
Isitya seglasi esisusekayo ukuze ucoce ngamanzi okanye usebenzise umatshini wokuhlamba izitya, usempilweni ngakumbi.
Egqithileyo Kushushu kwiCold Water Dispenser, kwi-High-Capacity Umthwalo ongezantsi wokuhambisa amanzi opholileyo ngamanzi ashushu nabandayo. Kuvunyiwe i-UL / yeNkanyezi ye-Energy, WS-20CH
Okulandelayo: Ukulayisha okuphezulu okupholileyo kwaManzi, uMlawuli wamanzi ubambe iibhotile ezi-3 ukuya kwezi-5 zeGalon, uKhuseleko loKhuseleko lwaBantwana, iSistim yokuPholisa iCompressor, Amanzi abandayo kunye ashushu- Ul / iNkwenkwezi yamandla evunyiweyo, i-Black WS-22CHM-1
UShaohong Air Fryer, i-13QT yomoya weFryer sesitovu, uSapho ...
I-Shaohong itowaster countertop, 10 ...
Umphunga ve ve oven ve ve ve ve Inf ra ...